"Ufundisa" njani umxhasi malunga noyilo lwegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngamanye amaxesha abanye abayili bakhonza abathengi babo becinga ukuba sele eyazi ukuba iyilo lantoni; nangona kunjalo kwaye ixesha elininzi, umthengi akayazi into ethethwa ngumyili kwaye oku kuhlala kukhokelela kukungaqondani, kuba ngokwesiqhelo ukuthetha nomthengi ngokungathi lonke ulwazi luyinto yemihla ngemihla kuye kwaye utyekele ekulibeleni ukuba kuthatha iminyaka emi-4-5 eyunivesithi ukufunda ngoyilo lwegraphic.
Ukushwankathela, abayili bafuna ukuba abathengi babo baqonde yonke into kwaye kwangaxeshanye bacinga ukuba abazi kwanto malunga noyilo, ke apha siza kukunika iingcebiso ezininzi zokuphucula iinkonzo zabathengi, ke qaphela.
Indlela "yokufundisa" umxhasi ukuze bazi ukuba yeyiphi uyilo lwegraphic?
1 Cinga ukuba umthengi akazi kwanto yoyilo
2 Ngena "kwihlabathi" lomthengi wakho kwaye ufumane ukuthembela kwabo
3 Chonga injongo yeprojekthi
4 Ufundisa umthengi
Cinga ukuba umthengi akazi kwanto yoyilo
Ukusukela umzuzu xa umxhasi ecela uhlahlo-lwabiwo mali zama ukucacisa nayiphi na imibuzo ukufumanisa kanye le nto uyifunayo. Phanda ukuba ngaba into ethethwa ngumthengi yile nto bafuna ukuyithetha, kwaye emva kokuba uyiqondile injongo yomthengi, lixesha lokuba umqonde kakuhle umthengi ngokwakhe.
Ngena "kwihlabathi" lomthengi wakho kwaye ufumane ukuthembela kwabo
Ngokwesiqhelo abanye abayili ngenxa yokungazithembi, Qalisa iprojekthi ngaphambi kwexesha ukuzama "ukuchukumisa", nangona kunjalo, oku kuhlala kubangela ukungazithembi kumthengi.
Ngokukhawuleza uyakuqonda oko kufunwa ngumthengi, intengiso abakuyo, ukhuphiswano lwabo, ulwimi abaqhele ukulusebenzisa, njl. ngokukhawuleza unokufumana ukuthembela kwabo. Ngale ndlela, unokumchukumisa ngokwenyani kwaye umenze akulungele ukufunda ukuba yintoni efunekayo kuyilo ngaphezulu kwenkqubo yokhathalelo / yokudala.
Chonga injongo yeprojekthi
Abathengi bahlala beba nemibono emininzi, nangona kunjalo, kwaye bexabisa uluvo lwabo kwifom yeprojekthi, banokuncama kakhulu okanye bonwabe ngakumbi, Injongo yeprojekthi ibandakanya ukuzimiselaNgamanye amagama, ngaphambi kokuyiqala, kufanelekile ukufumanisa ukuba yeyiphi na iprojekthi eza kuphuhliswa; yintoni injongo yakho; zithini izingqinisiso zakho; ixesha eliza kwenziwa ngalo; iya kusiwa njani; abo banoxanduva kwaye ngokucacileyo, iindleko zokugqibela.
Njengengcali, Ukufundisa abathengi luxanduva lomyili, ngenxa yokuba umthengi akanaso isibophelelo sokwazi nantoni na yeli lizwe kwaye kwizihlandlo ezininzi, akazi nto kwaphela malunga noyilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » "Ufundisa" njani umxhasi malunga noyilo lwegraphic